Makhaayadaha saqafka sare Oo Maqaayadaha In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Makhaayadaha saqafka sare Oo Maqaayadaha In Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 05/12/2020)
Ma waxaad tahay nooca qof jecel socodka iyo basaska? Markaas this post ma waxaa loogu talagalay adiga! Waxaan u malaynayaa in sida ugu fiican ee si aad u aragto qaar ka mid ah goobaha halyeey Europe ee waa by cabaya champagne on Terrace warami jiray ama cafe. Here are some Best rooftop restaurants and cafes in Europe so you can sight-see in style.
Best maqaayado xigeenka Masaarida iyo makhaayadaha ee Europe: Atlante Star Hotel – Rome, Italy
Marka in Rome, waxaad u baahan tahay inaad aragto dhammaan meelaha quruxda iyo qadiimiga ah - sida Kolosseum ama isha Trevi. Laakiin sidoo kale aad u leedahay in raaxaysan view qurux badan ee magaalada. Oo, markii ay booqaneysay bar iyaogoo Atlante Star Hotel ee aad leedahay aragti ah ee labada dal. Tani waa sababta aan ugu maleyneyno inay tahay mid ka mid ah makhaayadaha dusha sare iyo makhaayadaha ugu fiican Yurub!
Ku raaxayso views qurxoon ee Vatican City iyo Rome markii an espresso ama galaas khamri. Ma jiraan fursado badan oo ay ka khayr badan halkan soo afjaro maalin!
Safraya Rome tareen
tareenada Fast ka London to Rome take around 14 saacadood, covering a distance of approximately 1,434 kiiloomitir. Waxaa jira adeegyo joogto ah oo ku saabsan wadada tareenka u dhexeeya London iyo Rome. Trains for this journey usually open for booking around 12 bilood ka hor. Haddii ballan uusan weli u furmin taariikhahaaga markaa waxaad dejin kartaa digniinta ballansashada si aad u hesho emayl maalinta tikidhada ugu raqiisan ay diyaar u yihiin safarkaaga London iyo Rome ee tareenka. Isticmaal Save A tareenka si deg deg ah oo fudud loo dalbado!
Best maqaayado xigeenka Masaarida iyo makhaayadaha ee Europe: Cube Bar The - Galeries Lafayette - Paris, France
Waayo, mid ka mid ah outlooks ugu fiican Paris, madax ilaa Masaarida ee Galeries Lafayette dukaanka waaxda. Todobo dabaq ilaa, Terrace 1500m this bixisaa runtii cajiib ah 360 ° view ah ka gaartay Paris. Golaha Opera waa in kala duwan oo ku dhow iyo Tower Eiffel waa ay hortegi lahaa. Laakiin ma aha oo kaliya ku saabsan views, but the terrace also holds a modern and sleek rooftop bar called The Cube Bar.
Open-hawada iyo dabiiciga ah ee dejinta, Terrace waxay bixisaa in labada fariisan meelaha qorraxda iyo in ka badan daboolnayd ee Hooska. Laga soo bilaabo bar Masaarida, waxaad ka dalban kartaa biirka qabow, cocktails cabdo oo ay weheliyaan qaar ka mid ah cunto fudud PSG. Runtii kani waa mid ka mid ah makhaayadaha dusha sare iyo makhaayadaha ugu fiican Yurub, saas tahay in waqti fiican in ay la wareegaan kursi!
U safarka Paris tareen
London waa barta laga bilaabi caan ah oo dad badan ay fasax Yurub. A gaaban iyo tareen kortaan raaxo isku xira caasimadda ingiriiska oo la magaalada France ee jacaylka, Paris.
Waxaa jira tareen kaliya hal toos socda ka London in Paris: tareenka-xawaaraha sare ee Eurostar. Sidaas dhigaya doorashada xaq u tababaraan yara fudud! Hubi in aad iibsato tigidhka tareenka aad iyada oo loo marayo Save A Tareen in kastoo!
Best maqaayado xigeenka Masaarida iyo makhaayadaha ee Europe: Aria Hotel High Note Sky Bar – Budapest, Hungary
Aria Hotel High Note Sky bar in Budapest waxay bixisaa weyn view 360-degree of Buda iyo Cayayaanka. Waxay ku taalaa wadnaha ee Cayayaanka, kaliya dhagax la tuuro ka fog St. Stephen ee Basilica. Tani bar iminka soo jiidasho leh ayaa vibe aad u baashaal, waana si qumman oo ku raaxaysan Budapest aad qoyska iyo saaxiibada.
U safarka Budapest tareen
The tareen journey from London to Budapest is safe, fudud oo la awoodi karo iyo qaadataa uun 24 saacadood, by Eurostar si Paris iyo-xawaaraha sare TGV ka Paris si ay u Munich, then overnight sleeper to Budapest. Mise waxaa jira xiriir via Paris iyo Munich, ama via Brussels, Cologne & Vienna.
Best maqaayado xigeenka Masaarida iyo makhaayadaha ee Europe – Barcelona
1881 per SAGARDI is the restaurant of the History Museum of Catalonia, meel gaarka ah ee magaalada ee wax laga dhawro dekedda leh ee Barcelona iyo ka go'an oo gebi ahaanba si Mediterranean cunnada, tan iyo bad ilaa dalka. Tani waayo-aragnimo la dhamaystiro ee Terrace ee Indianes, bar a is biirsaday Terrace casriga ah Cafiyi dekedda leh ee Barcelona.
U safarka Barcelona tareen
Waa ay fududahay in laga soo safraan UK si ay u Spain tareen. A morning Eurostar to Paris in 2h20 from £44 one-way or £58 return, lunch at the remarkable Train Bleu restaurant at the Gare de Lyon, then the afternoon double-deck TGV dabaq to Figueres (for the Salvador Dali museum), Girona & Barcelona ka € 39 jid kasta. *Qiimaha ku xiran isbedel.
Ready in ay alaabahooda bacaha iyo booqo makhaayadaha xigeenka Masaarida U Best iyo makhaayadaha ee Europe? ha Save A tareenka is ogow of inaad hesho meesha aad u baahan tahay inaad!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-rooftop-restaurants-cafes-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#BestCafes #BestEuropeRestaurant #BestRestaurants #cafeview #restaurantview #warami europetravel longtrainjourneys Tranride tareen safarka